Sare u kaca Ujeedada-Keenay Suuqgeynta Bulshada | Martech Zone
Inta badan waxaad igu arkeysaa qaar ka mid ah doodaha waaweyn ee khadka tooska ah ee internetka ee ku saabsan wax kasta oo la xiriira siyaasadda, diinta iyo hanti-wadaagga… dhammaan badhannada gaduudan-kulul ee dadka badankood iska ilaaliyaan. Waa sababta aan u leeyahay maamuus shaqsiyadeed oo summad leh oo ku baahsan warbaahinta bulshada. Haddii aad rabto suuq geyn kaliya, raac astaanta. Haddii aad aniga i rabto, i soo raac… laakiin taxaddar… waad i wada helaysaa.
Intaan ahay hanti-wadaage aan xishood lahayn, haddana waxaan leeyahay qalbi weyn. Waxaan rumeysanahay inay tahay inaan is caawino oo aan ku tiirsanaan xafiisyada xafiisyada aan waxqabad lahayn ee aan waxtarka lahayn. Runtii waxaan aaminsanahay sida aan wax u badaleyno inay tahay qaadashada masuuliyada shaqsiyadeed iyo ka caawinta noqoshada horseedka isbedelka. Kuweena hay'adda had iyo jeer waxay ku deeqaan waqti, lacag iyo ilo kale si aan loogu caawin oo keliya hay'adaha samafalka… laakiin sidoo kale inay caawiyaan ganacsiyada aan haysan ilaha laakiin leh ballanqaad
Mar dambe kuma filna in la helo a joogitaanka bulshada. Suuqgeynta 3.0 waxaa ku guuleysan doona kuwa noqda ujeedoyin ujeeddo wadata, iyo in sidaa la yeelo, CMO, CSO, CSR, iyo aasaaska aasaasiga ah waa inay waafajiyaan si ay nolol ugu keenaan sheeko magac leh Baadhid Waxaan nahay 'infographic' Hoos waxaa ku qoran xaqiiqooyin adag oo qabow oo cadeynaya mustaqbalka macaashku waa ujeedo, calaamadaha ugu caansan ee mustaqbalka ayaa noqon doona kuwa dhaqaajiya isbedelka bulshada ee ugu macnaha badan. Simon Mainwaring
Kaliya maahan waxa saxda ah in la sameeyo, in ujeeddo laga kexeeyo ayaa sidoo kale noqoneysa rajo laga qabo ganacsiyada, dhiirigelinta shaqaalaha iyo macaamil iibsashada oo sii kordheysa. Dadku waxay rabaan lacagtooda inay aadaan meherado ka warqaba deegaanka, si wanaagsanna ula dhaqmaan shaqaalahooda, isla markaana waqti iyo tamar geliyaan sidii adduunka looga dhigi lahaa meel wanaagsan.
Waan ku faraxsanahay suuq ujeedo ujeeddo wadata waxay noqoneysaa istiraatiijiyad sii kordheysa iyo mowduuc wadahadal ah - Waxaan horay uga qoray jahwareerka aan haysto markii dadku dhaleeceeyaan sababa suuq geyn (tan waxaan kala hadalnay kan ALS Challenge Isboortiga Bukaanka… Ugh). Waxaan ku dhiirigelin lahaa shirkad kasta inay dhiirrigeliso dadaallada ay sameynayaan si ay u caawiyaan kuwa ku hareeraysan - tani waxay tilmaam u tahay sababta!
Tags: Jidkasababa suuq geynUjeedadaujeedo suuq geynujeedo suuq geyn bulshoujeedo wadidSimon Maiwaringsumadaha bulshadawaxaan marka hore
Sep 5, 2014 at 1: 11 PM
Mid aad u wanaagsan, Douglas. Tani dhab ahaan si dhakhso leh ayey u dhaceysaa waana inaan dhammaanteen diyaar u ahaano inaan la qabsanno. Mahadsanid!
Sep 6, 2014 at 1: 21 AM
Taasi igama gelineyso inaan ka fajaco halkii kuwaasi ay yihiin wajiyo dhab ah oo dhanka dhaqaalaha ah haa haa waxaad siisay tallaal dhan !!!
Nov 28, 2014 at 12: 20 AM
Douglas Post weyn. Lambarada aad ku soo qortay qodobkaan waa kuwo wargelin badan leh. Waxaan la kulmay maqaal la mid ah kaas oo ka hadlaya sida suuq-geynta Ujeedada loo wado ay aad uga badan tahay kaliya hal-ku-dhigga suuq geynta dijitaalka ah. http://bit.ly/1yj272u